ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: မိုးပေါ်ထောင်ပစ်သူများနှင့် ဆယ့်ရှစ်ရက်ကြာ
ဟယ် ... ပျောက်နေပါလားပေါ့ ... သူကလည်း ထွက်လာတာနဲ့ မိုးပေါ်ထောင်ပစ်မယ်ဆိုတာချည်းပဲ။
ပျောက်နေလို့ စိတ်ပူနေတာ ....
ဘလော့ဂ် ဗေကေးရှင်းထွက်နေတာလေ... တီတီဆွိရဲ့။ အခု အပျင်းပိုးနည်းနည်းသေသွားလို့ ပြန်ရေးတာ။
ကိုပေါစာပြန်ရေးတာ တွေ့လို့ဝမ်းသာပါတယ်။ ၈၈ တုန်းကလည်း မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူ ဟိန်တီတို့ ရူမေးနီးယားတို့မှာ ဆန္ဒပြလုပ်ရှားနေကြတာပ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ဒီမိုကရေစီ ရသွားတယ် မြန်မာနိုင်ငံ အခုထိမရဘူး။ တောင်ကိုးရိးယားလည်း ကိုယ့်ထက် နောက်ကျမှ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားပြီး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံက စစ်တပ်ကပဲ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အသုံးချကို ခံနေလို့ ဒီလောက်ကြာနေတာပါ။
ကျွန်မလည်း ပြန်ဖေါ်ပြတဲ့ပို့စ်တွေနဲ့ စခန်းသွားနေတာကြာပြီ။ အခုဘလော့ဂ်မှာ malware ဆိုတာ ၀င်နေလို့ ချိတ်ထားတဲ့ Link တွေ အကုန်ဖြုတ်လိုက်ရတယ်။ ဘယ်သူအသစ်တင်လို့တင်မှန်းမသိဘူး။ အခုလာတာ Facebook မှာတွေ့လို့ ရောက်လာပါတယ်။ ကိုပေါဘလော့ဂ်ကိုလည်း အဲဒီ malware ဆိုတာတွေ ၀င်နေမနေ စစ်ကြည့်ဦးနော့်။
ဟုတ်တယ်.. မငယ်နိုင်။ ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ စစ်တပ်က ကန့်လန့်ကြီးခံနေတော့ အခက်တွေ့နေတာပေါ့။
Malware ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ပန်ဒိုရာဘလော့ဂ်မှာ ဖတ်မိတဲ့အတွက် ရှိမရှိ စစ်ကြည့်တာ အခုထိတော့ မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အီဂျစ်နဲ့ မြန်မာကို တကယ်နှိုင်းကြည့်မိတယ်။
သူတို့ တွေပျော်နေတာတွေ့ ရတော့ ကျမတို့ ရော ဘယ်တော့လဲလို့...
Shinlay.... ၈၈ တုန်းက ဒေါက်တာမောင်မောင် ပြောခဲ့တယ်လေ။ “ဆန္ဒမစောကြပါနဲ့” တဲ့။ အခုတော့ ဆန္ဒက မစောတော့ဘူး။ နောက်တောင်တော်တော် နောက်ကျနေပြီလို့ ပြောရမယ်။
ဟာကွာ ။ ငါက ဒီလိပ်ခေါင်း အမြစ်ပြတ်သွားပြီထင်တာ ပြူတစ်ပြူတစ် ဖြစ်လာပြန်ပြီ။ ကိုင်း ရော့ ရော့ ဆေးနဲ့တို့လိုက်ဦးမယ် ။
ဒါဆိုရင် အန်ကယ်နိုင် (ကိုကြီးကျောက်) ကခေတ်မီသူတိုင်း ၀ဲပေါက်တယ်လို့ ပြောထားတော့ အခု ကိုပေါဘလော့ဂ်မှာ ၀ဲမပေါက်သေးရင် ကိုပေါတော့ ခေတ်မီတဲ့အထဲမှာ မပါတော့ဘူး။
It is naive to believe that people
can do power. I give credit to the
army more than people or those who
rallied those people. I think Mr.O
was also meddling other nation's
affairs as it was none of his biz.
I am happy for Egyptian people but
I worry there will be chaos soon if
the brotherhood will sneakily won.
There'sascimitar behind the smile
They will or may win and no need
real elections afterwards
ကိုပေါ တစ်ယောက် ပျောက်နေတာ ကြာလို့ ၂၀၁၁ မှာ Resolution ချပြီး ဘလော့ဂ်များ မရေးတော့ဘူးလား၊ Strategy တွေ ပြောင်းပြီး လုပ်နေပြီလား၊ ဟိုလား ဒီလားတွေ တွေးနေတာ။ ဘာလိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘလော့ဂ်မှာ ပြန်ပေါ်လာတာ ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ။
မပူနဲ့ ကိုအင်ဒီ... အတွေ့အကြုံအရ ကျနော့် Resolution တွေက တပတ်ထက် ပိုမခံဘူး။း-)
Hey..return of Bo Aung Din.(Sorry) well come to return of Ko Paw by shooting toward sky. Hey KP, Pls dun take vacation too long as u r required to keep on writting something related to encouraging democracy establishment in our country.Thanks
Nga Paw,, read this.. to enlighten yourself.. i believe u can read some English.. :D
အီ၈ျစ်က စစ်တပ်က လူစိတ်ရှိတဲ. စစ်သား နဲ. တည်ဆောက်ထားတဲ. တပ်မတော်...
မြန်မာ ပြည်က စစ်တပ်ကတော. ခွေးသာ သာ အသိဥာဏ် ရှိတဲ. စစ်သားတွေ နဲ. ဖွဲ.စည်းထားတာ ကွာတယ် ။
မြန်မာ စစ်သား ဘိုချူပ်တွေ ချီး မစားတဲ. အချိန်ရောက်ရင်တော. အီ၈ျစ် စစ်တပ်ကို မှီ မှာပါ။
စစ်သားတွေ ချီး မစားအောင် ၀ိုင်းကြိူးစားကြဘို.ဘဲရှိပါတယ်။
Yes,Suu Kyi and her followers who against their own country and support sanctions on their own people base on personal ambitions and jealousy are also as inferior as animal and even worse.
I see Suu Kyi and all her followers are Good for nothing.
Military regime is really working hard.
China and India have about 2.5 billions of people but how many of them condemn their own country from exile or overseas to make western enemy countries happy even they have their own problems?
Did they do like that?It means most of Myanmar's overseas working people are weak and easy to handle?
why Suu Kyi never urged her own son to participate in students' protest happened in London last year end for raising schol fees and made young people difficult to study higher education?
She should think and help to new young generations all over the world having jobless and uncertain future?
To the nut above-
((I see Suu Kyi and all her followers are Good for nothing.
Military regime is really working hard.))
Exactly , the military is working hard to steal almost all the remaining resources and state owned properties, by giving out shamelessly to their cronies and relatives.
How Chinese and Indian condemn to their countries? LoL, don't you see their governments are capable of doing to some extents to feed raise the living standards of their people who were under utter poverty in decades ago. What measures have you seen your Junta has taken at least to improve the lives of peasants, let alone genuine reforms for market economy? Instead, all we witnessed is prevalent cronyism and corruptions in every sector. Yet, you want us, and NLD, praise your bullshit Junta?
It is hilarious seeing your groundless claims about Daw Su's son for not participating student strikes in London. The fact is, let alone to join the student strikes, Kim himself is notastudent anymore because his education was severely disrupted due to his father's death as well as Daw Su's incapability to look after her children because she had been under arrest in more than 80% of her 20 years struggle.
Lecturing her to look after new generation all over the world? Another joke, haven't you seen Daw Su has been giving out her funds from all the prizes she won for Burmese students studying abroad as well as inside the country? Come on, she has no authority over IMF or any international fund to look after every youth on this earth. Ask the same question to your admirable Tyrant Than Shwe and let us hear if he has done anything like Daw Su's done so far.
Excellent, Ko Kyaw Htin. Thanks.
We agree with anonymous's remark that Su kyi and followers are good for nothing.
Who came to Myanmar for destructive elements should be treated as traitor and try by treason.
Myanmar's government should take action on these rubbish group for the good sake and gracious living of Myanmar citizen.
Myanmar Citizen,please start to think of showing disappointment by throwing stones/rotten eggs to the good-for-nothing.
What I see fairly from all media show that Su Kyi and followers are denying the fact they declared proudly during 1990s to sanction Myanmar and Utter Devastation,confrontation.
Now they(su kyi and good for nothing followers) are saying they never did it.
How come suu kyi suddenly become rat from lioness and start scaring of public's punishments?
I foresee Suu Kyi can't sleep safely anymore.She's having nightmare and dreaming of spirits of late Myanmar's patriotic Bo Min Yaung(Beheaded by British colonial government and General Aung Sann assassinated by pro-British politicians)appealing her "Why did you carry the blood of traitor?
We shamed of you bitch!
Now I understand why General Aung San's only son U Aung San Oo never against Myanmar and avoided her own sister.
Stone Stone "Good for nothing"
Stone stone "traitors"
Stone Stone Su Kyi
Counter sanctions have to initiate now.
I agree with U Tay Za and patriotic entrepreneus sanction plan on goods made in USA and brandname.
Ban the entry of Myanmar citizens who took asylum and refugee status before.
Isolate family of exiled and oppositions who urged and supported sanctions on Myanmar.
All their business and houndi exchange by traitors from foreign country must stop.
No extension on Myanmar passport belonged to traitor citizen.
ကိုယ့်ကိုကိုယ် မျိုးချစ်လို့ မပြောခင် ကသောက်ကမြောက် ချောက်တီးချောက်ချက်နဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုရေးတာကို လျှော့ပြီး ဗမာလို ရိုက်တတ်အောင် ကျင့်ပါဦးကွာ.. ပြီးမှ မင်းတို့ ရဲ့ ဝါဒဖြန့် ပွဲကြီး ဆက်လုပ်.. ဒါဆို ပိုထိရောက်မယ်။
မင်းဗိုလ်တေဇ ကို အနောက်နိုင်ငံကို ပြန်ပြီးစီးပွားရေး မပိတ်ဆို့ ခင် သူ့ လက်ရှိလေယာဉ်တွေကို အရင်ရောင်းပြီး တရုတ်လုပ်ပြောင်း သုံးဖို့ အရင်ပြောပေးပါဦးကွာ..
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်ခရိုင် ဘူးသိုမြို့နယ် ဘွားဒဲကျေးနယ်အတွင်းရှိ ထို့တလေးကိုးရွာ ဒေသခံလူထု၏ စပါးနှင့်ဆန် တင်း ၃၀၀ကျော်ကို နအဖ တပ်မ(၁၁)လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းအချို့နှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ယခုလဆန်းပိုင်း၌ ယူ ဆောင်စားသုံးနေကြောင်း ကေအိုင်စီက စုံစမ်းသိရှိရသည်။
နအဖ တပ်မ(၁၁) လက်အောက်ခံ ခြေမြန်တပ်ရင်း ခမရ(၂၁၂)၊ ခမရ(၂၂၀)တပ်များနှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်-BGF (၁၀၁၄) တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဘူးသိုမြို့နယ် မယ်ပ၊ မယ်လာ့ထာ့နှင့် ကျို့လို့ဂွင်အတွင်း လာရောက်လှုပ်ရှားမှုကို ရှောင်တိမ်းထွက်ပြေး နေသည့် ထို့တလေးကိုးရွာသားများ၏ ရွာတွင်းရှိ စပါးကျီများမှ စပါးနှင့် ဆန်များ ယခုလို ယူဆောင်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။
စပါးနှင့် ဆန်ယူစားခံရသူများမှာ စောဖါးဘလဲ့၏ စပါးတင်း ၆၀၊ ဆန် ၃တင်း။ စောသုဘွဲ၏ စပါးတင်း ၅၀၊ နော်ဝီ၏ စပါး တင်း ၇၀၊ စောဝါး၏ စပါးတင်း ၆၀၊ စောတိုပင်း၏ စပါးတင်း ၇၀တို့ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
KNU ဖာပွန်ခရိုင်၊ တပ်မဟာ(၅) ရုံးထိုင်မှူး ဗိုလ်မှူးစောကလယ်ဒို့က “သူတို့(နအဖနဲ့ BGF) အခု ရွာသားတွေရဲ့ စပါးနဲ့ ဆန်တွေယူစားတာ ထို့တလေးကိုးရွာတရွာပဲ ကောက်လို့ ရသေးတာ။ ကျန်တဲ့ အဲဒီနီးနားရွာတွေလည်း သူတို့ဟာ ယူစားခံ ရတာ ရှိတယ်။ ရှေ့တန်းမှာနေတော့ နောက်က သူတို့ဆီ ပို့လာတဲ့ ရိက္ခာက အခက်အခဲရှိတာကိုး။ ဒါကြောင့် လူထုစပါးနဲ့ ဆန်ကို ဒီလိုယူစားတာပေါ့။ တောင်ယာစပါးက သူတို့ စပါးထက် အရသာ အများကြီး သာတယ်လေ။ နောက် အဲဒီရွာတွေ က လူတွေမရှိတော့ပေမဲ့ ဆန်ထောင်းဆုံရှိတဲ့အခါကျတော့ လုပ်စားရတာ လွယ်လွယ်လေးပေါ့။”ဟု ပြောသည်။
၎င်းအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံတစ်ဦးက “ကျနော်တို့တော့ အတော်ဒုက္ခရောက်တယ်ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ဘာမှမတတ် နိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ဆန်၊ စပါးတွေကို သူတို့က ယူစားတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ လောလောဆယ် နီးစပ်ရာရွာတွေဆီက မျှဝေ ယူစားနေရတယ်။”ဟု ပြောသည်။
ဒေသခံများ၏ စပါးနှင့်ဆန်ကို ယူစားသည့် နအဖ တပ်မ(၁၁)လက်အောက်ခံ ခမရ(၂၁၂)၊ (၂၂၀)တပ်ရင်းသည် ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က ဒွယ်လိုးမြို့နယ် ကတိုင်တိကျေးနယ်၌ လှုပ်ရှားနေသည့် စကခ(၄) လက်အောက်ခံတပ်များနှင့် နေရာပြန်လာလဲ ကာ လက်ရှိ ၎င်း၏နေရာကို တပ်မ(၂၂) လက်အောက်ခံ ခမရ(၂၀၂)က အစားထိုးခဲ့သည်ဟု KNU ဖာပွန်ခရိုင် သတင်းရပ် ကွက်က ဆိုသည်။
ဗိုလ်မှူးစောမောင်ချစ် ဦးဆောင်သည့် နယ်ခြားစောင့်တပ်-BGF (၁၀၁၄)တပ်ဖွဲ့ဝင်များက ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖာပွန်ခရိုင် ဘူး သိုမြို့နယ် ဘွားဒဲကျေးနယ်အတွင်းတွင် ဆက်လက်ကျန်ရှိနေပြီး ပြန်လည်အစားထိုးလာသည့် နအဖ ခမရ(၂၀၂)နှင့် ပူး ပေါင်းလှုပ်ရှားလျှက်ရှိသည်။
၂၀၁၁ခုနှစ်ဆန်းပိုင်းအတွင်း ဖာပွန်ခရိုင်၊ ဘူးသိုမြို့နယ် ဘွားဒဲကျေးနယ်အတွင်းရှိ ရွာများ၌ ဒေသခံလူထု၏ စပါးနှင့် ဆန် များကို ယခုလို နအဖနှင့် BGF တပ်များက ယူဆောင်စားသောက်ခြင်းသည် ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
Hi Kyaw,How about your carrer ? Some PC don't have Myanmar fonts and we don't waste our time for this .OK ?? Good English can use at PUB and can beagood company staff .You are notasalary man ?
Amendment for my comment mentioned above to Ko Kyaw because i had wrongly paste .
Hi Kyaw,How about your carrer ? Some PC don't have Myanmar fonts and we don't waste our time for this .OK ?? Good English can use at pubs and can beagood company staff .You are notasalary man ?So nice !!!!!!
Hi Patriotic Citizen, Why do you waste your preciou times by seeing rubbish blogs .I understand we are affected by economic sanction although we are not related with Myanmar regime .But , we might keep in our mind for our feeling .Myanmar goverment will take necessary action very soon .
See Philippine today situation , military stood behind revolution and they got democracy but there is happening corruption and chaos today .So, how about democracy & human right ? Why US don't make investment to Philippine though they follow their instruction .The result of democracy in Philippine is getting chaos and rising poverty day by day .There is not attractive oil production like Middle East so, US don't want to invest in Philippine .So, what is the meaning of democracy ?Butm Filippinos can get US visa easier than Myanmars because State can play Philippine like as their puppet .
I don't understand comments. Have you little pathetic suckers written in English or Burglish or Bengali English?
'Why ....' and '.' instead of '?'
'We are not related with' instead
of '... not related to ...'.
"Carer" is someone who cares grannies and career isaseries
of jobs and professions. I wonder you are caring grand daddies as you areac..k sucking gay who has an urge or fetish for grand dads.
Are you after shrinking butts or placid cocks?
If you write in English, use proper English, not Burglish or
Bengali English, unless your grand mom metaBengali while she went down for fetching water in her village.
Guy with the big fat D... said...
Same again,these group of people are attaching to english language like their godmother Suu Kyi who f...ed by Englishman and delivered two crow-cuckoo hybrid sons.
Above excellent person with very good english will also be the hybrid one.
Do you have any good response other than grammar?
Try to understand the facts.If you want your mother and sis can carry the English blood.Just go down to pubs.Free D..k are there.
Myanmar's true Sons & Daughters said...
Dear Myanmar patriotic citizen,Please stop!Don't visit this blog anymore.No quality at all.
This blog owner and team have no quality.We all know who they are really?
We will learn English from them one day,may be very soon.
If I had chosen to write in Burmese, I think I can write better than you in both style and substance. I can and I do speak excellent Burmese and I can talk to you till your pathetic dick'd shrink for you'd lose confidence and manhood. To me, you are just
a Bengali pretending to beaBurmese who attempts to write in
pathetic substandard English. That
trick may work in Bangladeshi or
India or Pakistan but not in real
decent places where people speak
Perhaps, your grand ma did not only
went down to water front fetching water and there she metaBengali
but alsoaTamil, Talagu, Panjabi
anda"Kat Pa Li". Poor girl!
She might have even went down or
bent down there. Check with her but only after your grand pa (whom you thought he is your grand dad)
For the record, you are nothing but
a chap who cannot even writeafull
sentence properly. Go back to your
to learn from your Benglai masters!
It is obviously , how's mature & very gently Daw Su Kyi's fellowships ? They cannot explain very details & gently upon their mission.They just point out on typo-error of Precious& career( short ot "s" and "e").My comment didn't insult to his mother & father, this guy who named as anonymous's response is very blind .So, we can see very clearly , demo-activists in Singapore are fighthing for language only , not for policy changing in Myanmar .LOL !!!....:)
I was crasy on DASSK when i was beingauniversity student until under her house arrested .But , now i hate her and fellowships because of their attitude and i understand what kind of people are fellowships of NLD .They are so proud themself for their status in overseas with credit purchasing and instalment payment. Then , they jealous and comparing with ordinary rich people from Myanmar .So, i gave up to join such kind fo people .If they got chair & position in military , they will more cruel and rude than current miltary officers .Seeing is believing .Now, U Than Shwe & members are proceeding their way very smoothly among funny gossips and wrongly messages .Why is SPDC getting achievemnt ? We can see oppositions' performance .We can compare performance of demo-activists & military .Who is more systematic ?
Again- for amendment of typo-error
It is obviously , how's mature & very gently Daw Su Kyi's fellowships ? They cannot explain very details & gently upon their mission.They just point out on typo-error of Precious& career( short of "s" and "e").My comment didn't insult to his mother & father, this guy who named as anonymous's response is very blind .So, we can see very clearly , demo-activists in Singapore are fighthing for language only , not for policy changing in Myanmar .LOL !!!....:)
"Wanted Leader For Myanmar"
Language : English & Myanamr ( Good writing skill & spoken especially English )
Education level : Primary from International schools or oversea schools
Track record : No need
Important thing : You might possess excellent English speech & drama skills .
"Wanted leader for China"
Religious : Free thinker
Language : Mother Tongue ( English spoken also need for communication but not much , we can hire translator )
Experience : More than 20 years with good track record of country's restructure .
Important thing : Endurance & maturity
Which school did you go? U Thaw Bi Ta? Or Mulla Doke Kyi's school for
crappy English? Got an education before you bark Daw Su, ok? Get a
Gentleman above,you just made two grammatical mistakes while telling others off for their incorrect English. Well done. From Singapore ? :D LMAO
We should go learn from Mrs Aris. She definitely speaks better English than most of us. After all, she will even be able to teach us how to have pillow talk in English, won't she ? :D :D :D
Good! You are learning now!
How is this English suckers?
Ngar Loe Ma Suu Kyi.Lee sote ma Suu Kyi?
Dog Loe ma Suu Kyi?
don use wild wolrds to god for nothing gvys
These Burmese so called activists/ politicians are nothing in Myanmar.
Now they are earning small $$$ in overseas and making impression like they are rich and high status in Myanmar.
We know most of them and their root and status in Myanmar very well.
Whil the are working in overseas to earn $$$ to feed their kids and family,they want to critize this overseas country.
They are good for nothing in everywhere
Poor Burmese Pretenders.
How's this English
We admire U Than Shwe said...
yes,this is excelent English for Suckers behaving like High profile ha ha ha..
တို့က တောပြောတောင်ပြောဘဲ ပြောတတ်တာ။ ပြီးရင်ဖင်ခံလိုက်ရတာချည်းဘဲ။ ခံရနေကြဆိုတော့လည်း ရှက်တော့ပါဘူး။ ခွိ ခွိ ။
Hello Suu Kyi,
You can forgive easily British government who killed your own relatives really.
But why you can't forgive the weak and innocent Myanmar people who did nothing harm to you?
Are you afraid of your sons' future and status in overseas where they live by?
You want your sons to be proud in overseas countries by destroying Myanmar?
Please stop and go back to Britain now or we curse you and your whole generations have the very bad fateful mark on face till the end of the world.
Your husband already suffered the love of innocent Myanmar people.
For USA and western countries who want to help for Democracy in Myanmar
Some of your countries are having economic downturn and tax payers are homeless and queing for welfare day by day and more and more.
This isanormal sequence in the world,but We, honest Burmese(Myanmar)people wuld like to inform you regretfully for the sake of your own tax payers.
Burmese(Myanmar)activists are enjoying your taxpayers' funds for personal amusements and family matters.
Some of green card holders are overdrafting cash from all possible loans and creditcards and preparing to go back to Myanmar from borders.
We are hearing of many gren card holders(asylum) transfering $$$ to Myanmar for newly built condominiums.
Don't bailout again for these useless activists.
နိုင်ငံတော်အတွက် အနစ်နာခံ ကိုယ်ကျိုးစွန့် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကောင်းကြောင်းတွေ၊ အတိုက်အခံမကောင်းကြောင်း တွေကို အခုလို မဖြစ်စလောက် လစာလေးနဲ့မဖြစ်စလောက် အခွင့်ရေးလေးနဲ့အနစ်နာခံ ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ အွန်လိုင်း မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကြောင့် ဒို့တိုင်းပြည်ကြီးဟာ အမတန်မှ အရှိန်ကြီးစွာနဲ့ တိုးတက်နေပြီး ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဟေ့ လို့အခုလို ၀ံ့ဝံ့ကြွားကြွား နေနိုင်ကြတာပေါ့ဗျာ။ ( ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဦးသန်းရွေကြီးရဲ့အမျှော်မြင်ကြီးမားမှု၊ ထက်မြက်မှုနဲ့ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံဆောင်ရွက်မှုတွေက နာဂစ်ပရိုဂျက်ကြီးနဲ့ရွှေဝါရောင် သံဃာ အပြုတ်တိုက်ပွဲ တွေ က သက်သေပြနေပါတယ်။ )
တချို့များ ဗမာစကားကို နိုင်ငံခြားသံဝဲပြီး ပြောရုံတောင် မက ပါဘူး။ သူတို့ တတ်ထားတဲ့ ပညာတွေ ဟာ မြန်မာပြည် နဲ့ မတန်အောင် မြင့်နေတဲ့ အတွက် ပြန်လာလည်း အချည်းနှီးပဲ လို့တောင် ပြောတတ် ကြသေးတယ်။ တတ်ထားတဲ့ ပညာနဲ့ လူသား တွေကို အကျိုးပြု နေဖို့ပဲ လိုတယ်။ ဘယ်နိုင်ငံသား ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အမြင်မျိုး မထားသင့်ဘူး။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း ခေတ်မှာ ဂလိုဘယ် အ မြင်ရှိဖို့ လိုတယ်။ ဟို နိုင်ငံသား၊ ဒီ နိုင်ငံသား ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက် တွေဟာ ခေတ်နဲ့ မညီတော့ဘူး။ လူသား အားလုံး ဟာ ကမ္ဘာသူ၊ ကမ္ဘာသား တွေပဲ လို့ ကြည့်တတ် မြင်တတ် ရမယ် လို့လည်း ပြောလေ့ ရှိကြတယ်။
အရှက် မရှိလို့ မျက်နှာပြောင်တိုက် ပြီး ပြောနေ ကြတာပါ။ ကိုယ့်ရပ် ကိုယ့်ရွာက ကိုယ့် ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်း ကိုတောင် အကျိုးပြု ချင်တဲ့ စေတနာ မရှိတဲ့ သူမျိုးက ကမ္ဘာ့ လူသားတွေကို အကျိုးပြု မယ်လို့ ပြော နေတာကို ဘယ်သူက ယုံမှာလဲ။
It is very good article of Sayar U Sein Win.Please clarify yourself .
အွန်လိုင်း၊ ဘလော့နဲ့ facebook တွေပေါ်မှာ အန်တီစု၊ အန်တီစုဆိုပြီး တအားချစ်ပြနေကြသူတွေ၊ အကျယ်ချုပ်ကျတုန်းက ကိုယ်ချင်းစာသနားနေကြသူတွေက ခု လို လွတ်လပ်သွားချိန်မှာ ကိုယ်တိုင် သွားမတွေ့ကြပဲ အင်တာနက်ပေါ်ကပဲ ဓာတ်ပုံကြည့် စုတောင်းပေးနေကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ??? (ကိုယ့်နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ ကုလနဲ့ ကန်က လူတွေတောင် တကူးတက လာတွေ့နေကြတာ။ အမှန်တကယ် အရမ်းချစ်ရင် လူကိုယ်တိုင်သွားတွေ့သင့်တယ်၊ ဘယ်သူ ကိုယ့်အလုပ်အပျက်ခံပြီး သွားတွေ့နိုင်ကြလဲ??? တကယ်တော့ ဘယ်သူမှ မချစ်ပါဘူး... ဒေါ်စုကြည်ကို အသုံးချနေကြတာပါ...)
အင်တာနက်ပေါ်မှာ တူနီးရှားနဲ့ အီဂျစ်ကို အားကျပြီး တိုက်မယ်ခိုက်မယ် အော်နေသူများအနေနဲ့ ပါးစပ်နဲ့ အားကျပြီး လေနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တာတွေကို လျှော့ပါတော့။ တကယ်ဖြစ်ချင်ရင် တကယ်လုပ်မှရမယ် ဆိုတာကို နာလည်ပြီး ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံကြပါ။ လူထုတိုက်ပွဲကို လုပ်ချင်ရင် ကိုယ်တိုင် လူထုနဲ့ တသားတည်းဖြစ်အောင် ဝင်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လုပ်ပါ။ နောက်ကနေ အော်ပြီး ရှေ့ကလူကို တွန်းမထိုးနေကြပါနဲ့။
လူထုယုံကြည်အောင် တစ်စက်မှ မလုပ်နိုင်ပဲ လူထုကို အဆိပ်မခက်ကြပါနဲ့။
လူထုတိုက်ပွဲဖြစ်ရင် ဘယ်သူတွေ နစ်နာပါလဲ
ပြည်တွင်းက ဘာမှမသိတဲ့ လူတွေပဲ နစ်နာပါတယ်။
ဆန္ဒပြပွဲတစ်လျှောက် ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဆန္ဒပြသူတွေ ဖျက်ဆီးသမျှ ပြည်သူလူထုပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဆောက်အုံနဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပျက်ဆီးတာပါပဲ။
လူထုတိုက်ပွဲဖြစ်ရင် အင်တာနက်၊ အီးမေးနဲ့ ဘလော့ပေါ်ကလူတွေ ဘာလုပ်နိုင်သလဲ
ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်နှယောက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်၊ ဘယ်နှယောက် ဒုက္ခရောက်သွားတယ် ဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ပြီး ကီးဘုတ်ပေါ်ကနေ ထိုင်ရိုက်နေရုံပါပဲ
လူထုတိုက်ပွဲဖြစ်ရင် အင်တာနက်၊ အီးမေးနဲ့ ဘလော့ပေါ်ကလူတွေ ဘာတွေ နစ်နာနိုင်သလဲ
ဘာမှမနစ်နာပါဘူး။ မနစ်နာလို့လဲ လိုက်ပြီး အော်နေတာပါ။ နစ်နာစေမယ့် အရာတွေကိုလည်း ရှောင်ကြပါတယ်။
အနှစ် ၂၀ ကျော် နာမည်ခံ မြန်မာသူရဲကောင်း အတိုက်အခံတို့ကတော့ အနှစ် ၂၀ လုံး ဘာမှထူးထူးခြားခြား တိုးတက်အောင် မလုပ်နိုင်တဲ့အပြင် ခုလက်တလော ပြောင်းလဲနေတဲ့နိုင်ငံများကို အားကျပြီး လူထုတိုက်ပွဲကို ဖော်ဆောင်နေကြပါပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မီးရှို့သက်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သိပ်တော့ အထင်မကြီးလိုက်ပါနဲ့ facebook ပေါ်မှာပါ။
ခေါင်းဆောင်ဘယ်သူလဲ မမေးပါနဲ့။ ခေါင်းဆောင်ကနေ အောက်ခြေသိမ်းအီးမေးပို့တဲ့လူတွေထိ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်သူပါ ဆိုတာ ထုတ်ဖော်မပြောရဲကြသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ထူးဆန်းတာက အဲ့ဒီ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ထုတ်မပြောရဲကြသူတွေက email ၊ facebook နဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာတော့ ဆင်ဖမ်းမယ်၊ ကျားဖမ်းမယ် နဲ့ ခုချက်ချင်းပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မီးရှို့တော့မယ့်အလား အော်နေကြတာပါပဲ။
ထစ်ကနဲဆိုတာနဲ့ လူထုတိုက်ပွဲ ဆိုပြီး လုပ်နေခဲ့တာ တိုက်ပွဲပေါင်းလည်း မရေတွက်နိုင်တော့ပါဘူး။ အားတိုင်းကို လုပ်ချင်နေကြတာပါ။ လုပ်ချင်မှာပေါ့ facebook နဲ့ blog နဲ့ email ထဲမှာပဲ လုပ်ရတာကိုး။ ဘာမှမှ ထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိတာ။ ထိခိုက်နစ်နာမှု ရှိပြီး တကယ်အောင်မြင်မှု ရတဲ့ အလုပ်တွေကို တူနီးရှားနဲ့ အီဂျစ်တို့ လုပ်ပြသွားခဲ့ပြီ။
သက်သေပြသွားခဲ့ပြီ။ ဒီလိုလုပ်ရင် ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာ ရှင်းနေပြီ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ အတိုက်အခံတို့ အလွန်ကြောက်ချေးပမ်းကြပါတယ်။ ခု facebook ၊ email နဲ့ blog မှာ လက်သီးလက်မောင်း တန်းနေသူများ အပြင်မှာလုပ်ရဲလား မေးကြည့်ပါ။ အားလုံး ၂၀၁၁ တေမိ တွေဖြစ်ကုန်တာကို ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ လူထုတိုက်ပွဲကို လုပ်ချင်မှာပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲဆို တကယ်ကိုယ်ကျိုးစွန့်ရရင် ပြည်တွင်းက ဘာမှနားမလည်ပဲ နောက်ကလူတွေတွန်းတာနဲ့ ရှေ့ရောက်နေတဲ့ လူအတွေပါပဲ။ အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ ခုလည်း လူမိုက်ငှားနေကြ၊ လူအ ရှာနေကြတာပါ။
နအဖ ကို ငယ်ထိပ်တို့ အရှိက်တို့ကို တည့်တည့် ထိတာပဲ။ နအဖ က ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ပစ်တဲ့လူက သေတော့မယ်။ ဘယ်ဖြစ်မှာလဲ ပစ်နေတာက လေသေနက်ကိုး။ ဒါပေမယ့် ထပ်ပစ်နေတုန်းပဲ။ စားဝတ်နေရေးက ရှိသေးတယ်လေ။ ကိုယ်လုပ်နေတာတွေက နအဖ အတွက် ဘာမှ ဘာဆို ဘာမှ မဖြစ်စေဘူးဆိုတာ အစကတည်းက သိနေတာပဲ။ မသေမချင်း ပစ်မယ် (ကိုယ်မသေမချင်) သေမှ ရပ်မှာ။ မသေမချင်းတော့ လေ နဲ့တော့ တော်လှန်ရေးကြီးလုပ်နေအုံးမယ်။ အတိုက်အခံတွေ ဘယ်လောက် ဇွဲရှိကြောင်း ပြရမယ်။
ဘာဖြစ်လို့ နိုင်ငံခြားသွားချင်တာလဲ” လို့ ဆက်မေးကြည့်။ စာကောင်းကောင်း သင်ချင်လို့၊ အလုပ်ကောင်း ကောင်း လုပ်ချင်လို့ဆိုတဲ့ အဖြေနှစ်ခုပဲ တခုမဟုတ်တခုပေးမှာ သေချာပါတယ်၊ အင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်းတတ်တာနဲ့ စာကောင်းကောင်းတတ်မယ်၊ အလုပ်ကောင်းကောင်း ရမယ်လို့ သူတို့စိတ်မှာ ထင်နေကြရှာတာကိုး။
ခု တွေ့ နေရတာ..ကျပ်မပြည့်တဲ့ ကောင်တွေများတယ်...အထူးသဖြင့်..ဒီမို
Yes,even though they are heavily subsidised and granted for Master,PHD degrees in foreign countries,these people are working like clerks and technicians(base on the respective countries' standard salary and packages).
That's the miracle of Myanmar's overseas professional scholars situations nowaday???
But they always say Myanmar is bad and government personeel are not fluent in English.Wonderful!!!
Think and see your feet before condemning to real superior personnel without jealously.
If I write more with true personal datas,there could be very ugly scenes.
Anyway this is just to blog normally to enlighten,not personal.
Yes I do know someone who has real Master degree(studied2years in overseas for same first degree subject) but working as CAD drafter(even 2D only).
I think it's just temporary but she is working for almost3years already.
Now she is starting to talk it's because of Myanmar government and eager to join any protests for bad education system.
She even asking friends how much to pay for asylum/refugee camps to live in US and europe country.
Is it because of Myanmar government?
I need to confess that above post was copied from another blog.
Just sharing opinions democratically.Don't agree then neglect it!
အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေကို မကြည့်ဘူး၊ ရက်စက်တယ်လို့ အော်ချိန်မှာပဲ တဖက်ကလည်း တနိုင်ငံလုံး ပြည်သူတွေကို ထိခိုက်စေမဲယ့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ဘာမှမကြည့်ပဲကို အားရ၀မ်းသာ ထောက်ခံကြိုဆိုမှုတွေ၊ တိုက်တွန်းမှုတွေကို ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ကောင်း လုပ်ရမှာပဲ။
အဂတိလိုက်စားမှုတွေ အလွန်များပြားလို့ အစိုးရကို အပြစ်တင်ရမယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲ ဒုက္ခသည်ခံချင်ရင် ဘယ်လောက်ဆိုတဲ့ သူတို့ရဲ့ နာမည်ပေါင်းစုံနဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့ အဖွဲ့တွေထဲမှာ ဈေးကွက်နဲ့ကို ပေါ်ပေါက်နေတဲ့ အရာတစ်ခုကိုတော့ မမြင်ချင်ယောင် ဆောင်နေရမယ် (မမြင်တာတွေ လည်း ရှိကောင်းရှိမယ်)။
After I studied from facts including below link;
I understand Suu Kyi(wife of Michael Aris) is
the SUCKER who make Myanmar weak and Myanmar people disgraceful in international and traeted like slaves for cheap labor and cheap natural resources.
Suu Kyiand all of her generations should face short life with disgraceful,poverty,diseases and long term illness.
All her(Suu Kyi) generation will bear the mark of disgraceful on their face forever until the end of world.
That's what I can do for fellow Myanmar citizen who are suffering the burden of unfair sanctions.
'Yes I do know someone who has real Master degree(studied2years in overseas for same first degree subject) but working as CAD drafter(even 2D only).
I think it's just temporary but she is working for almost3years already.'
Did she wrapadildo to shove it up your arse or your mom's stinky ass?
We can understand that most of Myanmar dissidents in overseas had chance to get Master degree and live by world class countries,but they are doing like low level workers base on the standard ratings.
They blame Myanmar government for their poverty and inferiorness.
But even they had been granted very good chances in world class countries,did you ever heard of any success stories in this world class countries by these exiled BURMESE politicians and dissidents?
What really happened is funds corruptions,sex scandal,criminals???
So who's the real problem?
I can list down some of them by name.
Do you want to challenge????
Inferior Burmese(Myanmar) dissidents ha ha ha...
Even US and other rich countries who accepted them in the hope of future goodness,they only bring BAD LUCK to these countries when they arrived these countries...Huh
Bankrupt,bailout,social welfare,....burden for these countries' TAX PAYER???
Myanmar(Burma) is relieve from vibration of these bad luck inferior citizen???
Nowagenius Noble prize winner economist was sacked from the business unit which he setup.
How about Burma's one?
BBC.VOA,RFA,DVB news announcers like Kyaw Zan Thar,Nay Win,Thinn Thiri(Guess relative of opportunist NLD's Win Tin),...
When I was young 25years back,I admired them broadcating from overseas.
Actually they became announcers not by genius voice/professionalism but by chance of beingaBurmes(Myanmar) for Buma(Myanmar) programs.It means they got this job because they can speak Burmese fluently and able to read English.
I never see them career progress in international sectors like BLOOMBERG,CNN,BBC international,VOA international,ALJAZERA,....where most of asian countries native are bravely announcing news live.
How about these so called Burmese(Myanmar)news announcers/corespondents who think theirselves having superior knowledge and skills to guide Myanmar(Burma) citizen in Myanmar(Burma)for DEMOCRACY and ECONOMY???
Show us one of your guy appear infront of international TV channels for3consecutive years like as professional corresondents?
Otherwise you all Burmese correspondents are getting this position by taking $$$ to conspire Myanmar(Burma) for chaos and unstability in the aim of cheap labour and cheap natural resources.
Some announcer like Kyaw Zan Thar who frequently attacked/critized Myanmar(Burma,Bamar)) based on racial issues(Rakhine/Bamar).
After reading all the comments, we have to admit that Kyaw San's guys are really hard working. Even if noboby believe what they are propagating, they never give up.
Very poor oppositions.
Even I am Kyaw San's guy,for what?
Did you ever speak to Kyaw San?Do you know him personally?What's your level?
I can see you have nothing to proud and don't know how to respect people even enemy?
Bare in mind poor oppositions,you need to answer by facts not by personal feeling because you may be descended from inferior class in society and never worked hard for development and then don't know how to communicate with civilized public?
These kind of people are easy to jealous and no achievement in society.
Someone from Myanmar who critized Myanmar government for many things.
Then he and his family migrated toadeveloped SEA country to earn money to feed his family but still critized this country's government who allowed him to live by peacefully?
Almost all of Myanmar's overseas oppositions/activists/dissidents are like him.
But they support Suu Kyi who did nothing good for them and even don't know about her attitude and background at all.
So how smart are these activists.
People are laughing behind them ha ha ha...
ဟာ ဟ။ လိပ်ခေါင်းတခါပြူ comment ၇၀ လောက်ရပါလား။
Smartest pro-dictatorship guys
Yes, you guys are smartest in world who can work with world stupiest leaders (proudly praised by SG Mentor Lee Kuan Yew).
Most of the people can only propagate what they believe in.
Only few smart people like you can propagate what you do not even trust and believe in.
Please see below link and you'll know how the Democracy opportunists upgrade their life in Overseass under the REFUGEE/ASYLUM cover.
I predict this blogger and family will migrate to Australia with $$$ fromadeveloped SEA country.
@Cock suckers who attacked Daw Su
Keep in your bean sized brain that
there are Burmese who despise fatty
Than Shwe, sucker Aung Thaung but
at the same time who feel disgust
at those shit head Moe Thee, slutty
Nge Naing or Aung Myo Minn or Htin Lin or whatever although they love
Daw Su. Loving Daw Su does not mean that on the same side with
suckers you mentioned. But spare that juicy girl with glass - she spread her YouTube speech in English which after watching some old fags claimed and cried as the second coming of young Daw Su - for she hasahot ass.
Please be alert,there are some overseas working people who wnat to migrate to developed countries like US,Australia,Europe countries are misleading fellow Myanmar citizen to achieve their ambition to settle in developed countries by short-cuts.
Keep away from them as we know detail of their wickedness to use innocent myanmar citzenfor their family interests.
We'll publish these people' names and background for the good sake of simple and innocent Myanmar citizens abroad.
Very dirty and wicked conspiracies.
ပြောတော့ပြောနေကြတာပဲ ၊ အဖြေမပါဘူး ၊ ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မပါဘူး ၊ အပြစ်တင်တဲ့သူက တင်တယ် ဒေါသထွက်တဲ့သူကထွက်တယ် ၊ အပြစ်တင်တဲ့သူက ခနဲ.တယ် ဒေါသထွက်တဲ့သူက ဆဲတယ်။ သေချာတာကတော့ အားလုံးမှာနည်းလမ်းမရှိဘူး ဒါနဲ.များပြောနေကြကသေးတယ် အံ့ပါရဲ. ၊ နိုင်ငံရေးတွေ တိုင်းပြည်အတွက်တွေ ဘယ်သူမှားတယ် ဘယ်သူမှန်တယ်ဆိုတာတွေ ပြောနေဖို.အသာထားကြပါဘူး ကိုယ့်ကိုကိုရော အရင်ပြန်ဆန်းစစ်ကြပါ ၊ ငါဘယ်လောက်ပညာတတ်ပြီလဲ ငါ့အနားကလူတွေကိုဘယ်လောက်အကြိုးပြုခဲ့ပြီလဲ ၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူဆိုရင်လဲ လူငယ်တွေအတွက်ဘာတခုများ ရှေ.ဆောင်လမ်းပြဖြစ်ခဲ့ပြီလဲ သေချာပြန်စဉ်းစားပါ ၊ အလကားနေအာမနေကြပါနဲ. ၊ အပေါ် ကိုပေါရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ.ပြန်ပြောနေကြတာတွေ တော်တော်ကြီးကိုလွဲနေပါပြီ။ ဗမာလူမျိုးတွေမှာ အထူးချွန်ဆုံးကတော့ သူများမကောင်းကြောင်း အတင်းပြောဖို.နဲ. ၀ိုင်းအာဖို.မှာ အထူးချွန်ဆုံးပါပဲ။ ဘာတခုမှ မှတ်သားစရာမပါတဲ့ စကားတွေကို ပြောနေကြတာမြင်ရတာ တော်တော်လေးကို ရှက်မိပါတယ် (ဗမာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ.) နောက်တခု လူထုစိန်ဝင်းရဲ.စာတွေကို ဘလော့တွေမှာလာလာမကပ်ပါနဲ. သူ.စာတွေဟာလဲ ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲတွေပါပဲ ဟိုလူ.ပုတ်ခတ် ဒီလူ.ပုတ်ခတ်နဲ. သူကိုယ်တိုင်လဲ ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဖူးပါဘူး ၊ လူငယ်တွေအတွက်ရော ဘာတွေများ အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်လို.လဲ ( အကောင်းမမြင်ဝါဒီနဲ.လူတွေ တနေ.တနေ.မြင်လာရတာများတော့ ဗမာတောင်မဖြစ်ချင်တော့ဘူး စိတ်လဲပျက်တယ် ရှက်လဲရှက်တယ်။
Fulbright ပညာတော်သင်ဆု လျွှောက်လွှာများ အမေရိကန်သံရုံးက ခေါ်ယူ
http://burma.usembassy.gov/scholarships.html ကနေ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Thanks for US goverment for above scholarship program.We hope to get more and more educational aids for our new generations in Myanmar .
If you are being shame for being Myanmar , u can convert citizen at current country .Nobody hold you for it , it is your own opinion .Don't hesitate to convert.
( အကောင်းမမြင်ဝါဒီနဲ.လူတွေ တနေ.တနေ.မြင်လာရတာများတော့ ဗမာတောင်မဖြစ်ချင်တော့ဘူး စိတ်လဲပျက်တယ် ရှက်လဲရှက်တယ်။
"လူထုစိန်ဝင်းရဲ.စာတွေကို ဘလော့တွေမှာလာလာမကပ်ပါနဲ. သူ.စာတွေဟာလဲ ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲတွေပါပဲ ဟိုလူ.ပုတ်ခတ် ဒီလူ.ပုတ်ခတ်နဲ."
Cannot agree more with that!
I met and had chance to cordially chat with many of so called Myanmar activists in Singapore.
What they want is Myanmar to be pooor and so that they can visit Myanmar like kings and queens.
I see them opportunists and would urge Singapore government to review and accept only Myanmar professionals with good genes for the sake of original values.
I'm Myanmar and ready to discuss with MPs to advise real color of these rubbish Myanmar nationals.
Please try to reach me by technical methods.
'I met and had chance to cordially chat with many of so called Myanmar activists in Singapore.
Ta dah ta da blah blah blah
Please try to reach me by technical methods.'
To reach you for what? To grab your ass and shove it up in one push...?
Stupid and bullshit ppl above all.